> Resource > Ladnaansho > Photo Recovery u Mavericks, Ladnaansho Photos tirtiray ee Mac Mavericks
Si kasta oo ay u soo kabtaan sawiro ku computer Mavericks Mac?
Waxaan leenahay badan oo sawiro qoyska kaydiyaa aan Mac. Maanta, saaxiibkay ugu wanaagsan ee loo isticmaalo my computer, oo mana aan ogayn wixii uu sameeyey, oo dhan photos la waayay. Aan sameeyey baaritaan laakiin heli midkoodna. Waa si niyad jab. Sidee ayaan u soo kaban karto, sawirada? My computer waxaa socda Mavericks cusub.
Wixii sawiro muhiim ah ama macluumaad kale, waxa uu si dhab ah loo baahan yahay si ay u sameeyaan gurmad ah. Hadda in aadan sidaas samayn, fadlan kombiyuutarka la isticmaalin si degdeg ah ka dib markii xogta. Kaliya u hubso in aad ka heli kartaa fursad fiican si ay u soo kabsadaan. Xaaladdan oo kale, sawiro tirtiray ka computer Mavericks ah. Iyadoo kabashada sawir u Mavericks ah, waxaad weli dib u heli kartaa.
Kabsado photos ee Mac OS X Mavericks (Mac OS X 10.9)
First of dhan, waxaad u baahan tahay si aad u hesho dib u soo kabashada sawir u Mavericks ah: Wondershare Data Recovery for Mac . Tani Mavericks kabashada software sawir kuu ogolaanaya in aad ka bogsato sawiro kala duwan oo aad si qalad ah la tirtiro, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale. Ma aha oo kaliya on computer Mac, laakiin sidoo kale qalab kale oo lagu kaydiyo waxaa taageera kabashada sawirkan u Mac Mavericks. Ilaa iyo inta qalab aad waxaa laga garan karaa kombiyuutarka sida drive disk ah. Si kastaba, ha ayaa soo bixi version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah markii ugu horraysay.
Fadlan rakibi this software kabashada sawir Mavericks on Risaalo kale, halkii ay ka mid meesha aad sawiro laga badiyay. Kasta oo xogta cusub ku qoran oo meel dhigi kartaa sawiro lumay overwritten oo noqday unrecoverable. Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer iyo Raac tallaabooyinka hoose si ay u bilaabaan soo kabsaday aad sawiro lumay.
Tallaabada 1. Dooro habka soo kabashada ah ee aad sawiro lumay
Waxaa jira qaabab kabashada yar soo bandhigay suuqa kala aasaasiga ah ee barnaamijka. First of dhan, aad soo jeediyay in la doorto Recovery File Khasaaray . Hab kabashada Tani gebi ahaanba waa mid ku filan inuu ka soo kabsado files tirtiray amarka + Delete, ama weelna Trash.
Marka halkan yimid, oo dhan drives macquul ah aad Mac iyo qalabka kale ee la xiriirta kaydinta your computer waxaa laga heli doonaa oo ku qoran. Mid ka mid ah oo ku saabsan taas oo aad sawiro ay ku kaydsan hor Dooro iyo guji Scan button dusheeda in ay sii wadaan.
Kaliya for photos, waxaad sameyn kartaa nooca faylka adiga oo isticmaalaya ku ture File Select hoos liiska drive ka. Kaliya dooro Photo . Markaas natiijada scan muujin doonaa oo kaliya sawiro helay in aad.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos tirtiray Mavericks
Marka scan la dhammeeyo, waxaad eegi kartaa oo dhan photos recoverable in natiijada scan. Just calaamadee waxyaabaha aad rabto ka dibna riix Ladnaansho button iyaga badbaadiya, si aad u computer hal mar.
Fiiro gaar ah: Haddii aad weli aan ka heli kartaa sawiro ah, waxaad ka heli kartaa dib in ay isku dayaan ceeriin Recovery, kaas oo kaa caawin kara si aad u hesho files in aanad ka heli kartaa hab soo kabashada oo ka mid ah lumay Recovery File , laakiin files recoverable leeyihiin magacyo lahayn iyo qaab-dhismeedka galka. Si kastaba, waxaa qiimo leh isku day ah.